फ्रान्स र क्रोएसियामा कस्ले बाजी मार्ला यसपालिको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि – tvNEPALI
फ्रान्स र क्रोएसियामा कस्ले बाजी मार्ला यसपालिको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि
Posted on ३० असार २०७५, शनिबार ०९:५१ July 14, 2018
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आगामी आइतबार फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्ने भएका छन् । यो खेलमा जसले विजय हात पार्नेछ उस्ले ४ वर्षसम्म विश्व विजेताको रुपमा विश्व फुटबलमा राज गर्नेछ । अनि सुनको ट्रफी चुम्ने हक पाउने छ । तर यी दुई टोलीमध्ये कस्ले चुम्ला त सुनको ट्रफि ?
यी दुई टोलीको भिडन्त आगामी आइतबार राति पौने ९ बजे मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा हुदैछ । एक पटक विश्व कपको उपाधि उचालिसकेको फ्रान्स र उपाधि चुम्दै इतिहास रच्ने दाउमा देखिएको क्रोएसिया फाइनलमा पुगेसँगै नयाँ टोलीले उपाधि जित्छ कि पुरानै टोलीले भन्ने अड्कलबाजी पनि शुरु भएको छ ।
क्रोएसियाले बुधबार राति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो, भने फ्रान्सले बेल्जियममाथि १–० को जित निकालेर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो । फ्रान्स तेस्रो पटक फाइनलमा पुगेको हो । सन् १९९८ मा उपाधि जितेको फ्रान्सले २००६ मा पनि फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो ।
विश्वकपको फाइनलमा पहिलो पटक पुगेर इतिहास बनाएको क्रोएसियालाई नयाँ च्याम्पियन बन्ने सुनौलो अवसर आएको छ । युरोपको ‘प्लेअफ’ मा ग्रिसलाई समग्रमा ४–१ गोलले पछि पारेर पाँचौ पटक विश्वकपमा स्थान बनाएको क्रोएसियाले सन् १९९८ मा तेस्रो स्थान हात पार्नु बाहेकको उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन ।
तर यसपटक क्रोएसियाले सम्झनलायकको प्रर्दशन गर्दे पहिलो पटक विश्वकपमा फाईनलसम्मको यात्रा तय गरेको छ । विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएसँगै क्रोएसियाले केही रेकर्ड समेत बनाएको छ । बुधबार राती भएको सेमिफाईनल खेल जित्दै क्रोएसिया पहिलोपटक विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो । युरोपबाट फाइनलमा पुग्ने क्रोएसिया १० औं टिम बनेको छ ।
हालसम्म विश्वकपको उपाधी ८ टिमले मात्र जितेका छन् । आइतबार फ्रान्सलाई हराउन सके क्रोएसिया विश्वकप जित्ने नवौं टिम मात्र होइन नयाँ च्याम्पियन समेत बन्नेछ । विश्वकपको फाइनलमा पुग्ने क्रोएसिया जनसंख्याको आधारमा दोस्रो सानो देश हो । यसअघि उरुग्वेले १९ लाख जनसंख्या हुँदा फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो । हाल क्रोएसियाको जनसंख्या ४२ लाख छ ।
क्रोएसियाको टिम सन्तुलित पनि छ । यता सेमिफाइन खेलमा बेल्जियमलाई पराजीत गर्दे फाईनल पुगेको फ्रान्सको विश्वकपमा यो तेस्रो पटकको फाइनल यात्रा हो । सन् १९९८ र सन् २००६ मा उसले फाइनल खेलिसकेको छ । सन् १९९८ मा विजेता बनेको फ्रान्स सन् २००६ मा इटालीसँग पराजित भएको थियो । त्यसो त उपाधि उचाल्नबाट एक कदम पछि मात्रै रहेको फ्रान्स पनि उपाधी जित्दै १९९८ को ईतिहास दोहो¥याउने दाउमा देखिन्छ । फाईनलमा क्रोएसियालाई हराउन सके फ्रान्सले दोश्रोपटक उपाधी उचाल्दै विजेताको सुचिमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनेछ ।
सन् १९९८ को विश्व विजेता फ्रान्स १५ औं पटक विश्वकप खेलिरहेको छ । फिफा वरियताको ७ औ स्थानमा रहेको फ्रान्स युरोप छनोटको समूह ‘ए’ को विजता हुँदै विश्वकपमा छानिएको टोली हो । सन् १९९८ पछि दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको फ्रान्सले अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिना माथी सानदार जित दर्ता गरेको थियो ।
जसमा १९ वर्षिय काईलियन एम्बाप्पेको प्रर्दशन उत्कृष्ट र¥यो । जारी विश्वकपमा फ्रान्सले आफुलाई शसक्त दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर पुरानै टोली फ्रान्सले वा नयाँ टोली क्रोएसिया मध्ये कस्ले विश्वकपको उपाधी उचान्ने हो ? यो भने जुलाई १५ मा मस्कोस्थित लुज्निकि रंगशालामा हुने फाईनल खेलले निर्धारण गर्नेछ ।
Posted in खेलकुद Tagged क्रोएसिया, फ्रान्स, फ्रान्स र क्रोएसिया, लुज्निकी रंगशाला, विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता
पुटिन र ट्रम्पले संयुक्त वक्तव्य अनिश्चित
धमाधम ओली सरकारको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च